किन विश्वभरि नै पुरुषभन्दा महिला धेरै बाँच्छन् ? – Health Post Nepal
२०७५ फागुन २४ गते ९:३३
विश्वभरि नै पुरुषभन्दा महिला धेरै बाँच्छन् । तर, धनी राष्ट्रको इतिहास हेर्यो भने १९औँ शताब्दीमा यस्तो हुँदैनथ्यो । किन आजको युगमा महिलाभन्दा पुरुष बढी बाँच्छन् त ? र, किन यो समयक्रमसँगै बढिरहेको छ ? घटनाहरू असीमित छन्, तर हामीसँग यसको उत्तर भने सीमित छन् ।
हामीलाई थाहा छ, महिला र पुरुषको फरक जैविक आनिबानी र वातावरणीय प्रभावले केही भूमिका खेलेको छ, तर अहिलेसम्म यसको कंक्रिट कारण या उत्तर फेला पर्न सकेको छैन ।
विज्ञानले जैविक संरक्षण, महिलामा हुने राम्रो हर्मोन, शारीरिक परिवर्तन आदि कारणले पुरुषभन्दा महिला बढी बाँच्ने तर्क गर्छ । अर्कोतर्फ परम्परागत प्रवृत्ति हेर्यो भने महिलाभन्दा पुरुष जोखिमपूर्ण व्यवसायमा आबद्ध हुँदै आएका छन्, त्यसले पनि पुरुषको बाँच्ने उमेरमा फरक पारेको छ ।
अवसरसँगसँगै वर्षौं पहिलेदेखि पुरुषहरू धूमपान, मद्यपान गर्न थाले । वर्तमानलाई हेर्यो भने महिलाको तुलनामा मुटु, मिर्गौलासम्बन्धी असाध्य रोगबाट पुरुष नै बढी ग्रस्त छन् र मृत्यु हुने दर पनि पुरुषमा नै बढी छ ।
पुरुषलाई पर्ने पारिवारिक आर्थिक भार, सामाजिक र मानसिक उत्तरदायित्वले पनि केही हदसम्म फरक पारेको छ । सताब्दीयौँदेखि युद्ध, सुरक्षाबल, प्रहरीबल, खेलकुदजस्ता जोखिमपूर्ण पेसामा पुरुष नै हाबी हुने गर्थे । यद्यपि, अहिले यी सबै क्रियाकलापमा महिला सहभागिता बढ्दो छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक र आर्थिक विकाससँगसँगै पुरुषले बढी अवसर पाउन थाले र यसको दुरूपयोगको सुरुवात पनि पुरुषबाटै हुन थाल्यो । खानपिनलगायत कुरामा पुरुषभन्दा महिला धेरै अनुशासित छन् । परिणामस्वरूप महिलाले आफ्नो उमेर बढाउँदै लगेका छन् ।
विकसित मुलुकमा मातृमृत्युदर घटाउने उद्देश्यले सुरुवात गरिएका भ्याक्सिन, विभिन्न भिटामिन सप्लिमेन्ट, महिलामैत्री स्वास्थ्यसेवा आदिले पनि महिलाको आयु लम्ब्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । मातृमृत्युदर न्यून भएका विकसित देशमा महिलाको औसत उमेर ७९ वर्ष छ भने पुरुषको औसत उमेर ७२ वर्ष छ । त्यसैगरी, अविकसित मुलुकमा महिलाको औसत आयु ६६ वर्ष छ भने पुरुषको ६३ वर्ष छ ।
नेपालको सन्दर्भमा महिला र पुरुषको औसत उमेरमा खासै अन्तर देखिँदैन । नेपालमा महिलाको औसत उमेर ७१ वर्ष छ भने पुरुषको ७० वर्ष । तुलनात्मक रूपले नेपालले मातृस्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार गरेको र गाँउगाउँमा आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क गरेकाले महिलाहरू अन्य अविकसित मुलुकको तुलनामा बढी बाँच्न सफल छन् । पुरुषको तुलनामा अझै पनि आर्थिक, शैक्षिक, रोजगारी, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा असमान अवसरका कारण नेपाली महिलाको औसत आयु पुरुषको भन्दा खास अन्तर छैन ।
पपुलेसन रिफरेन्स ब्युरो (पिआरबी)ले जसरी समयसँगै मानिसको औसत उमेर बढेको छ, त्यसरी नै महिलाको औसत उमेर नाटकीय ढंगले बढेको उल्लेख गरेको छ । पिआरबीले एसियाका अफगानिस्तान, नेपाल, भुटान, पपुवा न्युगिनी र अफ्रिकाका नामिबिया र जिम्बावेमा भने महिला र पुरुषको उमेर अन्तर निकै कम भएको बताएको छ ।
लैंगिक हिसाबले औसत आयु सबैभन्दा धेरै अन्तर भएको देश रसिया हो, जहाँ महिला पुरुषभन्दा १३ वर्ष बढी बाँच्छन् । सबैभन्दा कम अन्तर भएको देश भुटान हो, जहाँ महिला र पुरुषको औसत आयुको अन्तर मात्र आधा वर्ष छ । रसियामा अत्यधिक मद्यपानका कारण पुरुषले आफ्नो उमेर घटाउँदै लगेको बताइएको छ ।
पपुलेसन रिफरेन्स ब्युरो (पिआरबी)ले जसरी समयसँगै मानिसको औसत उमेर बढेको छ, त्यसरी नै महिलाको औसत उमेर नाटकीय ढंगले बढेको उल्लेख गरेको छ । पिआरबीले एसियाका अफगानिस्तान, नेपाल, भुटान, पपुवा न्युगिनी र अफ्रिकाका नामिबिया र जिम्बावेमा भने महिला र पुरुषको उमेर अन्तर निकै कम भएको बताएको छ । नेपालमा पुरुषको औषत आयु ७० दशमल ४ छ भने, महिलाको ७१ वर्ष छ।